Dingana Voalohany Fandraisana Anjara Amin’ny Tetikasam-Pikarohana: Teny Teratany sy Media Nomerika · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Genner Llanes-Ortiz
Voadika ny 14 Febroary 2016 5:03 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, عربي, Español
Saripikan'i Diego Gómez Aldana.
Nisy fiantraikany tsy noheverina nandritra ny fanombohan'ny taonjato faha-21 ny fivoaran'ny fampitam-baovao nomerika haingana nanomboka nandritra ny folo taona faran'ny taonjato faha-20. Nandray tsimoramora fa feno fitokisana ireo fitaovam-pampitam-baovao ireo ny vahoaka, izay natao anjorom-bala ny kolontsainy sy ny teniny sady nafindran'ny Fanjakana-firenena toerana, mba hanamafisana orina indray ny kolontsain'izy ireo sy ny fisian'ny fiteny eto amin'ny toerana fanaovana aterineto.
Ao Amerika Latina, nanjakàn'ny vahoaka safiotra (metisy) miteny Espaniola ny fironana malaza indrindra amin'ny fikatrohana ara-nomerika. Saingy nanomboka nahita miandalana sy mifanindran-dalana amin'izany izahay amin'ireo maodely mihamaro kokoa amin'ny fandraisan'ny fiarahamonina sy ny tsirairay avy amin'ny vazimba teratany ny fitaovana nomerika. Miainga amin'ny fandikan-teny sy ny fahitana rindrambaiko maimaimpoana sy ny media sosialy mandalo amin'ny fitahirizan-tahirinkevitra nomerika ireo riba, tantara sy fanehoana ny kanton'izy ireo manokana, ka hatramin'ny famoronana fampiharana ampianarana sy ianarana ny fiteny teratany izany, dia mivelatra ao anatin'ny hetsika maro isan-karazany ny fanomezan-java-baovao nomerika avy amin'ny vazimba teratany, hetsika izay tsy mora fantatra hatrany ho “fikatrohana”.
Na izany aza dia mila mijery ireo fisantarana andraikitra ireo ao anatin'ny zavamisy ao amin'ny faritra misy azy ireo isika. Eto, na dia efa eo aza ny fanitsiana lalàmpanorenana napetraka hankatoavana sy hiantohana ny zon'ny vahoaka vazimba teratany ao Amerika Latina nandritra ny roapolo taona farany, dia toa tsy vonona hampihatra ny roa amin'ireo fitakiana lehibe indrindra nataon'ny hetsiky ny vazimba teratany ny Fanjakana sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ireto avy izany: ny fampiroboroboana ny fampianarana ny fiteny teratany ao amin'ny firenena sy ny famelàna azy ireo hanangana haino aman-jery izay izany ny vazimba teratany no tompony.
Manoloana ny tsy fahitana ny Fanjakana hanatontosa ny adidiny, dia namorona fomba vaovao hanamafisana orina ny tenin'izy ireo ny olon-tsotra, vondrona, ary ny fikambanam-piarahamonina, manararaotra ny fahamoran'ny fitaovana teknolojia nomerika, sy ny fanohanan’ ireo mpikatroky ny rindrambaiko maimaimpoana. Ao anatin’ izany “fikatrohana ara-kolontsaina” izany, dia avy ireo mpikatroka antserasera mametraka fantsona fampielezampeo nomerika antserasera sy lahatsary, mamerina amin'ny laoniny, mamadika ho nomerika ary mampiely indray ireo rakipeo sy sary efa ela, manangana tambajotra finday ho an'ny fiarahamonina; mamokatra sombin-drakikira mba hamelomana indray ireo teny andalam-pahafatesana; mamoaka bilaogy sy sary namboarina natao hanala hamohamo amin'ny fiteny roa (amin'ny fitenin'izy ireo sy amin'ny fiteny espaniola); mianatra ny fomba ampiarahana manonja sehatra an'aterineto isankarazany sy ny media sosialy; manatontosa horonantsary ifarimbonan'ny tsirairay sy iarahan'ny fiarahamonina manangana fitantarana ara-maso vaovao; mitatitra ny tolon'izy ireo sy mampifandray azy ireo amin'ny tolon'ny indizeny hafa amin'ny alalan'ny vohikalam-baovao, Twitter sy YouTube, ary “mametraka” ny feon'izy ireo ao amin'ny (Sound)cloud” [rahom-peo] hiresahana hatsikana, hihirana hoan'ny ala mikitroka, ary hanome ny hevitr'izy ireo momba ny hoavy.
Saripikan'i Diego Gómez Aldana
Hatramin'ny 2013 ny Global Voices nanomboka fiarahamiasa matanjaka tamin'ireo fikambanana sy mpikatroka mirotsaka an-tsehatra amin'ny hetsika fanavaozan'ny nomerika ny fiteny teratany. Amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bolan'ny Hivos sy ireo ivontoerana mpiara-dia hafa, dia mandray anjara amin'ny fikarakarana Fivoriana Misahana ny Fikatrohana Nomerika handalàna ny Teny Teratany any amin'ny faritra izy. Ny voalohany dia notontosaina tao Oaxaca, Meksika tamin'ny Oktobra 2014, ary ny roa hafa tao Bogota, Colombia tamin'ny Jona 2015, ary avy eo tany Cusco, Però tamin'ny Desambra 2015. Nanome fakana vahana vaovao ho amin'ny fifandraisana sy ny fifankatoavana teo amin'ny samy mpandray anjara ireo hetsika ireo ary niteraka famoronana ny Tambajotran'ny Fikatrohana Nomerika Ho an'ny Teny Teratany.
Amin'izany lalan'asa izany ihany, miaraka amin'ny fanohanan'ny Ford Foundation, dia nanomboka nitambatra ny ekipan-teratany mpikaroka tamin'ny Oktobra 2015. Hisahana ny fampivelarana ny tetikasa fikarohana mifototra amin'ny traikefa 15 hampiasana ny teknolojia sy ny media nomerika hanovozan-kevitra, hampitana ary hanamafisana orina ireo teny Teratany ao Amerika Latinina ity ekipa ity.
Hita ao amin'ity ekipa ity ny lehiben'ny fanadihadiana, Genner Llanes-Ortiz (Yucatec Maya), ny mpanadihady mpiara-miombon'antoka, Pedro Cardona (Zapotec), ary mpanadihadim-paritra miisa efatra ahitana an'i Ruben Hilari (Aymara), Liseth Atamain (Awajun), Duvan Almendra (Misak) ary i Yasnaya Aguilar (Mixe). Samy lehiben'ny tetikasan'izy ireo avy manokana ireo mpikambana ao amin'ity ekipa ity ary mpitondra fanavaozana nomerika amin'ny fitenin'izy ireo manokana. Ho kitro ifaharana hahatakarana ireo fandraisana an-tanana nomerika tafiditra amin'ny fikarohana avy amin'ny fomba fijerin'ireo mpandray anjara ny zava-niainany sy ny fahaizany mandray sy mampita izay niainan'ny hafa .
Inona no mandrisika ny vondrona Teratany sy olon-tsotra hanatanteraka dingana hamerina indray, hanamafy orina sy hampiroborobo ny fiten'izy ireo amin'ny fampiasana ny media sosialy?
Inona no kinasan’ izy ireo ary inona ireo tanjona tratrarin'izy ireo?
Inona avy ireo fahasarotana atrehin'izy ireo ao amin'ny zavamisy ara-piarahamonina sy ara-politika misy azy ireo?
Ahoana no fomba hamahan'izy ireo ny olana atrehiny eo amin'ny sehatry ny fotodrafitrasa nomerika?
Inona avy ireo paikady ara-pifandraisana nofinidin'izy ireo?
Inona ny fifanekena natsangan’ izy ireo?
Ahoana no fomba idiran'izy ireo amin'ny fiofanana ara-teknolojia any ivelany, na ahoana no fomba hifampiofanan'izy ireo?
Ahoana ny fandraisan'ny fiarahamonim-pitenenan'izy ireo, ny fiarahamonina ao amin'ny firenena, ary ny tambajotran'ny aterineto manerantany azy ireo?
Inona no tanjona kendren'izy ireo rahatrizay, ary inona avy ireo fitaovana afaka hanampy hanatanterahana na hampitomboana ny fiantraikan'ny asan'izy ireo?
Ireo ny sasany amin'ireo fanontaniana hitarika ny fikarohana ataon'izy ireo amin'ny fisantarana andraikitra teratany ara-nomerika ireo. Kendren'ny tetikasam-pikarohana ny hametraka fifandraisana iaraha-miasa ao amin'ny mpikarakara sy ny mpikatroka mba hisian'ny fiantraikany tsara ao amin'ny asan'izy ireo. Ny vokatra voalohany amin'ny fandrindrana ny fanavaozana ara-nomerika amin'ny teny fiteny teratany dia hampahafantarina ny daholobe ao amin'ity habaka ity: activismolenguas.org, ka ho mora kirakiraina ao ihany koa ihany koa ny resadresaka antserasera handraisana fanehoan-kevitra sy hitarika fanontaniana sy andiam-panadihadiana vaovao.
Saripikan'i Eduardo Ávila
Taorian'ny dingana voalohany tamin'ny famoriana ny ekipa, nisy ny adihevitra hamantarana ny sahan-tsirinkevitra sy hametrahana famaritana iasana hitarika mankany amin'ny fanadihadiana. Satria tsy mbola noresahana mihitsy tamin'izany fomba izany na tamin’ izany dingana izany ny saha hohadihadiana, dia antenaina hitondra fahazavana vaovao hamantarana ireo fanamby sy fanararaotra apetrak'ilay antsoina hoe “vanim-potoana nomerika” amin'ny olona teratany ao Amerika ny asan'ity vondron'ny teratany mpikatroka, mpampiroborobo sy mpampianatry ny sekoly ambony ity. Manaraka sakeli-dalana maro izay zara raha nanafosafo ny [tany] ny fikatrohana nomerikan'ny fiteny teratany, saingy manantena isika fa hanokatra lalana ho any amin'ny famotorana vaovao sy tsara kokoa ny torohay sy ny fanadihadiana mivoaka avy amin'ity ezaka ity.